थोक Froted मैट गिलास खाली मैनबत्ती जार भाँडाहरू कारखाना र निर्माताहरू Winby
गिलास मोमबत्ती जार
फ्रोस्टेड म्याट गिलास खाली मोमबत्ती होल्डर
१. मैनबत्तीको भाँडो विभिन्न आकार र र by्गले बनाउन सकिन्छ, हामी ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू स्वीकार्छौं।
२. यो मैनबत्तीको जार फ्रोस्टेड गिलास र बाँसको झाकद्वारा बनाइएको छ, सतहको बनावट धेरै राम्रो छ।
मैनबत्ती जारलाई भोटिव वा चिया प्रकाश मोमबत्तीको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ।
PERFECT भोजन मेज, मानसिक, साइड टेबल, रेस्टुरेन्ट र होटलहरूको लागि सजावट।
एक शब्दमा, आकार 、 लोगो 、 र all सबै अनुकूलित गर्न सकिन्छ, हामी पनी तपाईंलाई राम्रो गुण, पर्याप्त मूल्य र बिक्री सेवा पछि शीर्ष-र्याकिंग दिन सक्छौं।
समाप्त गर्दै फ्रोस्टेड / म्याट
आकार D6.2CM * H8.1CM D7.2CM * H9.1Cmm: D8.2CM * H9.8CM
सामग्री फ्रोस्टेड गिलास कप र बाँसको ढक्कन
तौल 175g 225g 345g
ढक्कन काठको ढक्कन वा बाँसको ढक्कन
रंग सेतो, कालो, खैरो, अनुकूलित गर्न सकिन्छ
उपयोग मैनबत्ती बनाउने / गृह सजावट
सबै भन्दा पहिले, हामीसँग छ प्रमाणपत्र यूरो मानक अन्तर्गत। हाम्रो मैनबत्तीहरू यूरोपियन मानकमा राम्रोसँग छन्, त्यसैले तपाईं हाम्रो मैनबत्तीको गुणस्तरको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। हाम्रा उत्पादनहरू दर्जनौं देशहरू र क्षेत्रहरूमा निर्यात गरिन्छ, जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, युरोप, दक्षिणपूर्व, इत्यादि। र तिनीहरूलाई घर-विदेशमा ग्राहकहरूले राम्रो स्वागत गर्छन्।
अर्कोतर्फ, हाम्रो गिलास मोमबत्ती होल्डरलाई उच्च-गुणवत्ताको कच्चा माल र पर्यावरण-अनुकूल कांचको सामानको साथ प्रयोग गरिन्छ, जुन निश्चित रूपमा निकै गिलास होईन र यसले मानिसहरूलाई हानी गर्दैन। तपाईको छनौटको लागी धेरै प्रकारका गिलास मोमबत्ती जारहरू छन्, जस्तै पिलर गिलास जारहरू, मसन जारहरू, स्क्वायर गिलास जारहरू, पुडिंग ग्लास मोमबत्ती जारहरू, याँकी स्टाइल ग्लास जारहरू, इत्यादि।
थप, गिलास मोमबत्ती जारहरू बिभिन्न प्रभावहरूमा बनाउन सकिन्छ, म्याट 、 फ्रोस्टेड ished पॉलिश गरिएको 、 स्प्रेइ asको रूपमा। तपाईं मनपर्दो प्रभाव छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि, यदि तपाईं ग्लास कपमा तपाईंको आफ्नै लोगो वा लेबलहरू प्रिन्ट गर्न चाहानुहुन्छ भने हामी पनि गर्न सक्दछौं। तपाईंले हामीलाई तपाईंको डिजाइनहरू पठाउन आवश्यक पर्दछ, हामी तपाईंलाई सन्दर्भको रूपमा रेन्डरिंग गर्न सक्दछौं।
थप रूपमा, तपाईं आफ्नो सामानको लागि विभिन्न ढकहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग बाँसको ढकनी 、 काठको ढकनी 、 धातुको ढकनी छ, जुन शीशाको भाँडोमा सुन्दर छन्।
अन्तिमप्याकिंगको बारेमा, हामी यातायातको समयमा क्षतिबाट बच्नको लागि गिलास मोमबत्तीको भाँडो लपेट्न एयर स्तम्भहरू बबल ब्याग प्रयोग गर्छौं। हामी उत्पादनहरूलाई अत्यन्त सीमा सम्म सुरक्षित गर्नेछौं, ताकि उत्पादनहरू सुरक्षित रूपमा ग्राहकहरूमा डेलिभर गर्न सकिन्छ।
यहाँ हाम्रो ग्राहकहरु बाट केहि अनुकूल टिप्पणीहरु छन्:
अघिल्लो: मैनबत्ती विकको लागि मोमबत्ती बनाउने उपकरण
अर्को: पालिस गिलास जार सुगन्धित मोमबत्ती बाँसको ढक्कनको साथ
कालो गिलास मोमबत्ती जार
म्यानबत्ती ग्लास जार लकड़ीको ढक्कनको साथ
कस्टम ग्लास मोमबत्ती जारहरू
खाली गिलास मोमबत्ती जार
कालो खाली गिलास मोमबत्ती कन्टेनर
बहु-आकार स्पष्ट मैट फ्रोस्टेड ग्लास मोमबत्ती जार ...
फ्रोस्टेड खाली मैनबत्ती कन्टेनर ग्लास जार
फ्रुस्टेड म्याट ग्लास खाली मैनबत्ती होल्डर-शैम्पेग ...
बहु आकार स्प्रेड पोलिश गिलास मोमबत्ती कन्टेनर
Ml०० मिलि polish पालिस गिलास मोमबत्ती जारहरू